Juventus Oo Bareejo Lagu Celiyay iyo Roma oo Badisay “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Kooxda Juventus ayaa garoonkeeda Juventus Stadium galabta barbardhac 1-1 ah kula gashay kooxda Sampdoria.
Kooxda Juventus ayaa goolka la hor martay,waxaana daqiiqadii 12-aad ee ciyaarta u dhaliyay ciyaaryahan Patrice Evra,sidasi ayaana lagu kala nastay qeybtii hore ee ciyaarta.
Ciyaaryahan Manolo Gabbiadini ayaa bilowgii qeybtii danbe ee ciyaarta goolka barbardhaca u dhaliyay kooxda Sampdoria.
Kooxda Juventus ayaa bareejo gashay kulankii labaad oo xiriir ah oo ka tirsan horyaalka talyaaniga.
Kooxda Juventus ayaa horyaalka talyaaniga ku hogaamineyso 36-dhibcood,halka kooxda Sampdoria ay horyaalka uga jirto kaalinta afaraad,iyadoo leh 24-dhibcood.
Dhinaca kale kooxda Roma ayaa hal dhibic u soo jirsatay kooxda Juventus,ka dib markii ay 1-0 uga badisay kooxda Genoa.
Kooxda Genoa oo lagu ciyaarayay garoonkeeda Stadio Luigi Ferraris ayaa waxaa qeybtii hore ee ciyaarta kaarka casaanka ah ka qaatay gool haye Matia Perin.
Kooxda Roma ayaa rigooradii ay heshay oo uu u laaday ciyaaryahan Adem Ljajic waxaa ka badbaadiyay gool haye Eugenio Lamanna oo bedel ku soo galay ciyaarta.
Ciyaaryahan Radja Nainggolan ayaa dhamaadkii qeybtii hore ee ciyaarta goolka guusha u dhaliyay kooxda Roma.
Kooxda Roma ayaa Kaalinta Labaad uga jirto horyaalka talyaaniga,waxana ay leedahay 35-dhibcood,halka kooxda Genoa ay horyaalka uga jirto kaalinta shanaad,iyadoo leh 26-dhibcood.
Kooxda Udinese ayaa waxaa garoonkeeda Stadio Friuli 1-2 uga badiyay kooxda Hellas Verona.
Kooxda Udinese ayaa goolka la hor martay,waxana daqiiqadii 31-aad ee ciyaarta u dhaliyay ciyaaryahan Antonio Di Natale.
Ciyaaryahan Luca Toni ayaa dhamaadkii qeybtii hore ee ciyaarta goolka barbardhaca u dhaliyay kooxda Hellas Verona.
Ciyaaryahan Lazaros Christodoulopoulos ayaa bilowgii qeybtii labaad ee ciyaarta goolka labaad ee guusha u dhaliyay kooxda Hellas Verona.
Kooxda Udinese ayaa kala horeynta horyaalka talyaaniga uga jirto kaalinta sagaalaad,waxana ay leedahay 21-dhibcood,halka kooxda Hellas Verona ay horyaalka uga jirto kaalinta 13-aad,iyadoo leh 17-dhibcood.